Rosia: Nahoana Isika No Mandao Ny Firenentsika? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2011 5:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, 日本語, Español, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Efa hita an-jato taona mahery tany io olan'ny fifindra-monina faobe eo amin'ny Rosiana io. Fahizay, onjam-pifindra-monina maro no nahatonga ny firenena ho tsy ampy mpiasa mahafeno ny fepetra ilaina, olona mpahay siansa sy mpanoratra ihany koa. Nanomboka teo dia tsy nisy fiatoana ny fifindra-monina avy any Rosia. Na teo aza ny fihatsaran'ny toe-karena to ho ato, dia mbola maro hatrany ireo Rosiana no mbola manonofy handao ny taniny.
Nitatitra [ru] ny gazety Rosiana Novaya gazeta fa araka ny tarehimarika farany teo, dia 22 isan-jaton’ ireo olon-dehibe (indrindra indrindra fa ireo mpandraraha sy ny mpianatra) no naneho ny faniriany handao tanteraka an'i Rosia. Nanome “tarehimarika ofisialy” ihany koa ny mpanao gazety: 1.3 ny mpandalina ny ara-tsiansa sy ny injeniera izay nandao ny taniny “tato anatin'ireo taona faramparany teo.”
“I Rosia no haratsiana amin'ny endriny hita vatana sy tsy mifangaro,” hoy ny voalohan-tenin'ny lahatsoratra am-bilaogy nosoratana mpanoratra Rosiana fanta-daza iray, ary mpitsoa-ponenana kosa ankehitriny dia Yuri Nesternko, izay nahazo fialonkalofana ara-politika any Etazonia. Nanohina ny fon'ireo Rosiana maro mpitoraka bilaogy ilay lahatsoratra izay manana ny lazany ankehitriny [ru] nosoratan'i Nesterenko tamin'ny faran'ny taona 2010, nampitondrainy ny lohateny hoe “Exodus”.
Mamaritra ny tenany ho “tovovavy tanora 25 taona maniry ny handao io firenena io” ilay mpitoraka blaogy antsoina hoe Viktoria. Nanoratra lahatsoratra iray izy nampitondrainy ny lohateny hoe “Antony miisa sivy no handaozako an'i Rosia” [ru] izay nahazoana “mpankafy” miisa 9,000 tao amin'ny Facebook, mpamaky miisa 8,000 tao amin'ny tambajotra sosialy Rosiana be mpahafantatra, Vkontakte.ru, ary miisa 1,400 ireo namerina nanao tweets tao amin'ny Twitter, mihoatra ny 2,000 ihany koa ny fanamarihana azo.
Nandritry ny fivadibadihan'ny onjan'ny fifanakalozan-dresaka momba ny fifindra-monina teo amin'ny aterineto Rosiana, nanoratra lahatsoratra somary mampiseho fiahiahiana ilay mpitoraka bilaogy iray armyan-capitan [ru] mikasika ny hoe nahoana no tsy mieritreritra ny hifindra monina mihitsy ny olona maro. Hoy i armyan-capitan hoe: ny toe-tsaina no tena antony:
Aza manao izay hampihomehy ahy ianao. Niaritra 10 taona ny raibenao raha nosamborina ry zareo ary tsy nety nifindra monina eny na dia hankany amin'ny tanàna akaiky azy aza. Ary raha nalefa tany Kolyma [en] [faritra ao Siberia fanta-daza amin'ny tobiny antsoina hoe Gulag ] aza izy ireo, dia niandry famelankeloka faobe teo am-pitsindrohana sakafo tany anaty fakon'ny fonja. Nefa tsy “biby fiompy” izy ireo fa olo-manan-kaja, mpitondra fanjakàna tao amin'ny governemanta sy manampahaizana matsilo saina … Fa ireo zafikeliny no lasa “biby fiompy” Mpitandro ny filaminana matavy be, mpiasa birao fotsy vozon'akanjo ary foloalindahy mpisava làlan'i Putin. Tsy hifindra monina na aiza na aiza ianao. Ary izany dia tsy noho ny tsy fananam-bola
Nanao tatitra ny sampan-draharaha Rosiana mpanao fitsapan-kevitra, Levada-Center [ru], fa vitsy dia vitsy ireo Rosiana no mieritreritra hoe mizotra amin'ny làlana tena izy ny fireneny. Mihamihena tsikelikely ny isan'ny mponina izay mankato ny asa ataon'ny governemanta.